Nhau TCK46D Dual-spindle slant bed live turret CNC lathe muchina
TCK46D Dual-spindle slant bed yekugara turret CNC lathe muchina
Zvimiro zveTCK46D Dual-spindle slant bed yekugara turret CNC lathe muchina:
1.TCK46D dual-spindle single-power turret CNC machine tool, ine kushanda kwepamusoro uye kugadzikana kwepamusoro;
2. Njanji inotungamira inotora yakakwira frequency kuomesa rectangular guide rail, iyo ine hunhu hwehukukutu hwepamusoro, kukwirira kupfeka kusagadzikana uye kufamba kwakanyanya;
3. Iyo huru yedhiraivha system inofambiswa neyepamusoro-inoshanda AC spindle servo mota, uye musoro wemusoro unotora gearless drive.Iyo yekumberi uye kumashure mabheji eiyo huru shaft yakashongedzerwa nekubatanidzwa kweangular contact ball bearings uye kaviri-mutsara tapered rollers, iyo inosangana zvizere neiyo radial uye axial mutoro wekutakura simba pasi pekucheka kunorema;
4. Iyo turret yemagetsi ine yakanyanya kuomarara yekucheka kunorema, nzira mbiri-iri padyo sarudzo yekushandisa, uye yekupedzisira-ipfupi chishandiso chekuchinja nguva, iyo inogona kuona kumberi nekumashure kutendeuka uye kugaya komboni machining uye kunatsiridza kugadzirwa kwakanaka;
5. Madhiraivha akatwasuka uye akatwasuka anoshandisa yakakwirira-inoshanda AC servo mota, ine yakakwirira chinzvimbo chakarurama uye inochinjika uye yakavimbika mafambiro;
6. Uchishandisa otomatiki centralized lubrication mudziyo, iyo lubrication yakakwana uye yakavimbika;
Kushandisa uye chiyero cheTCK46D Dual-spindle slant mubhedha wekugara turret CNC lathe muchina
1. Pamusoro pemabasa eGeneral CNC lathes, chigadzirwa ichi chinewo mabasa akadai sekuchera, kuwedzera, kugadzirazve, kugaya, uye kubaya.Iko kusungirirwa kwemaitiro kunogona kuderedza huwandu hwezvikamu zvinosunga uye kugadzirisa iko machining ezvikamu.Iyo yakapetwa kaviri-spindle chimiro inogona kuona U-turn kutendeuka kune imwechete muchina chishandiso, saka ichi chishandiso chemuchina chakanyanya kukodzera kugadzirisa zvikamu zvine maitiro akanyanya kudzika;
2. Inogona kugadzira short shaft (kana disc) zvikamu zvine maumbirwo akaoma ejometri, hukuru hwakasiyana-siyana uye zvinodikanwa zvakanyanya, zvakadai semacylindrical surfaces, conical surfaces, stepped surfaces, spherical surfaces uye mamwe maitiro ekuchinja;
3. Inokodzera chidimbu chimwe chete kana chepakati uye chidiki kugadzirwa kwemadiki uye epakati-saizi asina-ferrous uye ferrous metal workpieces;
4. Zvishandiso zvemuchina zvakakodzerwa nekugadzirwa kwemagetsi mumakina, zviridzwa, indasitiri yakareruka, zvemagetsi, zviridzwa zvekurapa uye mamwe maindasitiri.
Tsanangudzo yeTCK46D Dual-spindle slant bed yekugara turret CNC lathe muchina
Max.Svetera pamusoro pemuchinjikwa slide
45° integral inclined lathe
X axis kufamba
Z1 axis kufamba
Z2 axis kufamba
12 chiteshi chekugara turret
X/Z axis chinzvimbo chechokwadi
X/Z axis repositioning huchokwadi
Spindle dividing positioning kurongeka
Spindle dividing repositioning kurongeka
Nguva yekutumira: Kubvumbi-19-2022